Viber နဲ့ ဖုန်းခေါ်ကြမယ် - အောင်အောင်ဆွေ Blog
Viber နဲ့ ဖုန်းခေါ်ကြမယ်
ပထမဆုံး . . . Viber.apk ကိုအရင်ဒေါင်းပါ . . .
ပြီးရင် . . ဖုန်းထဲထည့်ပြီး Install လုပ်ပါ . . ပြီးသွားရင်တော့ . . အောက်ကအတိုင်းလုပ်ပါ . .
၁။ Internet connection ဖွင့်ထားရပါမယ် . .
၂။ Viber Application ကိုဖွင့်ပါ ။ ပေါ်ပေါ်လာခြင်း စာမျက်နှာမှာ . .Continue လုပ်ပါ ။
၃။ ပေါ်လာတဲ့ Box မှာ OK လုပ်ပါ ၊ Contact တွေယူမယ်လို့ ပြောတာပါ ။
၄။ နောက်တစ်နေရာကတော့ ဖုန်းနံပါတ်တောင်းနေပါလိမ့်မယ် ။ အင်တာနက်ဖွင့်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ အပေါ်က Box မှာ +95(Myanmar) ဆိုပြီးပေါ်နေမှာပါ . .အောက်မှာ ဖုန်းနံပါတ် ရိုက်ထည့်ရမှာပါ . .
၅။ ဖုန်းနံပါတ်နေရာမှာ ဥပမာ ၀၉-၄၃၀၂၇၇၂၅ ဆိုရင် ဒီလိုရိုက်ရမှာပါ - ၉၄၃၀၂၇၇၂၅ ။ ၀ကိုဖျောက် လိုက်တာပါ ။ ပြီးရင် Continue လုပ်ပါ . .
Waiting for SMS message ဆိုပြီး Enter Viber မှာရပ်နေပါလိမ့်မယ် . .စောင့်မနေပါနဲ့. . Message လာလိမ့်မှာမဟုတ်ပါဘူး . . Keyboard ကိုအောက်ချပြီး . . Enter Viber ရဲ့အောက်က Click Here ဆိုတာလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ။
၆။ ပြီးရင် Get Code ကိုဆက်နှိပ်ပါ . .
ဒါဆိုရင်တော့ Viber ကနေ သင့်ဆီကို Automatic ဖုန်း call ၀င်လာပြီး ဂဏန်းလေးလုံးပြောပါလိမ့်မယ် . . Viber Application ကိုပြန်အစက၀င်ပြီး . . အဲဒီ့လေးလုံးရိုက်ပြီး Enter Viber လုပ်လိုက်ရင်တော့ သင့် Viber Account ဟာ Activated ဖြစ်သွားပါပြီ ။
Note : ဖုန်းလိုင်းကြပ်တဲ့ အချိန်မှာ တော့ Automatic Call ၀င်ဖို့ ခက်သလို တစ်နေ့ မှာ လည်းဖုန်းတစ်ခုကို နှစ် call ပဲပြန်ပေးပါတယ် . . Error တက်သွားရင် ၂၄ နာရီ စောင့်ရပါတယ် . . ဖုန်းနံပါတ်ကြိုက်သလောက်ပြောင်းပြီး(အိမ်ဖုန်းနဲ့ လည်းရ) Automatic Call တောင်းလို့ ရပေမယ့် . . ရလာတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုပဲ Viber ခေါ်တဲ့အခါ တစ်ဖက်လူကမြင်ရမှာပါ ။ ကိုယ့်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ ပဲတောင်းတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ . . . Viber နဲ့ ဖုန်းခေါ်ကြမယ်